Uma ungibekezelele eminyakeni eyishumi edlule, ngiyaqiniseka ukuthi uzibonele ukulangazelela kwami ​​ukuzibandakanya ezinkundleni zokuxhumana. Uma usesekhona, ngiyabonga ukuthi usekhona - ngoba ngokungazi ngagxumela ezinkundleni zokuxhumana ngijabule ngethuba lokwakha ukuxhumana okungcono futhi ngiqonde kangcono abanye. Kwakunechibi elingajulile ukusho okuncane.
Amathuba ukuthi ubungangibona ngikhuluma emcimbini, ubusebenza nami, noma uke wezwa ngami wangengeza njengomngani kunoma yisiphi isiteshi sezokuxhumana… ngixhumene nawe naku-inthanethi. Iziteshi zami zokuxhumana zenhlalo beziyincwadi evulekile - ngabelana ngebhizinisi lami, impilo yami, umndeni wami… yebo… ipolitiki yami. Konke ngamathemba wokuxhuma.
Okusweleka ezinkundleni zokuxhumana noma yimuphi umongo. Angikwazi ukukutshela ngaso sonke isikhathi lapho benginikeza khona ukuphawula futhi ngokushesha ngabizwa ngokuthi okuphambene nalokho engangikukholelwa empeleni. Ukubuyekezwa ngakunye kwezokuxhumana komphakathi ukuthi ama-algorithms akhuthaza i-push and pull in the izizwe zombili izethameli ezihlasela. Ngeshwa, ukungaziwa kuyanezela kukho kuphela.
Umongo ubaluleke kakhulu kunoma yiluphi uhlelo lwezinkolelo. Kunesizathu sokuthi izingane zivame ukukhula ngezinkolelo ezifana nezabazali bazo. Akunjalo ukufundiswa, kungokoqobo ukuthi nsuku zonke bafundisiwe futhi bathola inkolelo evela kumuntu abamthandayo futhi abamhloniphayo. Leyo nkolelo isekelwa ngokugcwele ngokuhamba kwesikhathi ngezinkulungwane noma ngamakhulu ezinkulungwane zokuxhumana. Hlanganisa leyo nkolelo nokuhlangenwe nakho okusekelayo kanye nalezo zinkolelo kuvaliwe. Leyo yinto enzima - uma kungenzeki - ukujika.
Angikhulumi ngenzondo lapha… yize lokho kungadabukisa futhi ukuthi kufundwe. Ngikhuluma ngezinto ezilula… njengokukholelwa emandleni aphakeme, imfundo, indima kahulumeni, ingcebo, ibhizinisi, njll. Iqiniso ngukuthi sonke sinezinkolelo ezigxilile kithina, amava aqinisa lezo zinkolelo nemibono yethu. zomhlaba zihlukile ngenxa yazo. Leyo yinto okufanele ihlonishwe kepha imvamisa ayikho ezinkundleni zokuxhumana.
Ngakho-ke, njengoba ngibona abanye abantu abangakaze basebenzise noma ngubani ohlinzeka ngemibono yabo online, ngikhona konke ukunikela okwami! Isisebenzi esaqhubeka nokuzenzela ibhizinisi sangibiza ngemuva kwezinyanga sathi, "Angikaze ngazi!". Iqiniso liwukuthi uze ube sezicathulweni zomunye umuntu, wena kuphela ukucabanga uyasiqonda isimo sabo. Iqiniso ukuthi ngeke uze ube lapho.
Indlela Engilungisa Ngayo Idumela Lami Lezokuxhumana
Uma ungilandela, usazobona ukuthi ngingumuntu othembekile, othanda imibono ku-inthanethi kepha ukuthi ukwabelana kwami ​​nemikhuba yami kushintshe kakhulu kule minyaka embalwa edlule. Lowo kube ngumphumela onzima wokulahlekelwa ngabangane, ukucasula umndeni, futhi… yebo… nokulahlekelwa yibhizinisi ngenxa yakho. Nasi iseluleko sami ngokuqhubekela phambili:
Ngisavulekele kakhulu ukuxhumana nanoma ngubani on LinkedIn ngoba ngizokwabelana ngebhizinisi lami kuphela, ama-athikili wami ahlobene nebhizinisi, nama-podcast ami lapho. Ngibonile abanye abantu babelana ngezibuyekezo zomuntu siqu lapho futhi ngingeluleka ngakho. Ubungeke ungene egumbini lokubhoda bese uqala ukumemeza abantu… ungakwenzi ku-LinkedIn. Igumbi lakho lokubhoda eliku-inthanethi futhi udinga ukuligcina lelo banga lobuchwepheshe lapho.
Kukhona ingxoxo encane noma ayikho, ngokubonga, ku-Instagram. Esikhundleni salokho, ukubuka ku- ukuphila kwami engifuna ukuyiqoqa ngokucophelela futhi ngihlanganyele nabanye.
Ngisho naku-Instagram, kufanele ngiqaphele. Iqoqo lami elikhulu le-bourbon empeleni linabantu abaxhumane nami ngenxa yokukhathazeka ukuthi ngingahle ngibe yisidakwa. Uma i-Instagram yami iqanjwe ngokuthi "Iqoqo lami le-bourbon", umugqa wama-bourbons engiwuqoqile ungalunga. Kodwa-ke, ikhasi lami yimi… futhi incazelo yami ingukuphila okungaphezu kweminyaka engama-50. Ngenxa yalokho, kunemifanekiso eminingi kakhulu ye-bourbon, futhi abantu bacabanga ukuthi ngidakiwe. Oy.
Engikuthandayo nge-Twitter ukuthi ama-algorithms abonakala eveza umbono olinganiselayo ngami kunama-tweets ami aphikisana kakhulu. Futhi… izingxoxo mpikiswano ku-Twitter zingenza uhlu oluthrendayo kepha ungagudluli njalo ekusakazeni. Nginezingxoxo ezanelisa kakhulu ku-Twitter… noma ngabe basempikiswaneni evuthayo. Futhi, ngivame ukuvimbela ingxoxo evusa imizwa ngegama elinomusa. Ku-Facebook, lokho kubonakala kungenzeki.
I-Twitter izoba ngumzila onzima kimi wokunikeza imibono yami… kepha ngiyabona ukuthi kusengalimaza idumela lami. Impendulo eyodwa ekhishwe kumongo wayo yonke ingxoxo yephrofayela yami yonke ingahle ichaze incithakalo. Ngichitha isikhathi esiningi nginquma ukuthi yini engihlanganyela ngayo ku-Twitter kunangaphambili. Izikhathi eziningi, angikchofozi ukushicilela ku-tweet bese ngiqhubeka.
Okwamanje, ngiyabesaba abaholi embonini yami abahlonishwayo abajeziswe ngokwanele ukuthi bangalokothi babambe iqhaza ezinkundleni zokuxhumana. Abanye bangacabanga ukuthi lokho kuyigwala kancane… kepha ngicabanga ukuthi kuvame ukuthatha isibindi esikhulu ukuvala umlomo wakho kunokuzivulela ukugxekwa nokukhansela isiko esilibona lishesha online.
Akudabukisi yini ukuthi ukhiye wezokuxhumana kungenzeka ukuthi ugweme ukuwusebenzisa ngokuphelele?